Rehefa nampanatenaina dia tanterahina. Isan’ny Velirano nataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fampivoarana an’i Madagasikara (Modernisation de Madagascar).Omaly no napetraka ny tetik’asa “HOTSPOT WIFI” ho an’ireo vahoakan’i Tsiroanomandindy.Nisolotena ny fitondram-panjakana ny Minisitry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampivoarana ny Haitao Ara-kajy Mirindra, Atoa RAMAHERIJAONA ANDRIAMANIHSOA, nanontrona azy ny Governoran’ny Faritra Bongolava, ny Solombavambahoakan’ny Distrikan’i Tsiroanomandindy ary ireo manam-pahefana tany an-toerana.
𝗙𝗔𝗡𝗔𝗠𝗔𝗥𝗜𝗛𝗔𝗡𝗔//𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔 𝗛𝗢 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗔𝗧𝗥𝗔
Ireo tranok’ala fanovozam-pahalalana, fikaroham-baovao, fitediavan’asa, sy ny toa izany no tena anentanana ireo mpampiasa internet eny amin’ny hotspot wifi, tsy manakana ireo mpisitraka izany hampiasa tambazotra sosialy mampifandray azy ireo amin’ny havany sy ny fianakaviany, ary koa entin’ireo mponina hampahafantarana ireo maha izay azy an’i faritra sy tanana misy azy .
Entitra dia entitra ny fanaraha-maso sy fiarovana ireo mpampiasa ny internet amin’ity tetik’asa ity. Voarara ary tsy azo idirana mihintsy ireo tranok’ala manana endrika mamoafady rehetra, ary eo ampidirana amin’ny fampiasana internet dia misy ny famenoana ny laharana findain’ilay olona hampiasa, ka raha misy fihoaram-pefy na asa ratsy ataony dia tsy ho sarotra amintsika mihintsy ny hanenjika sy hamantatra ireny olona ireny.
Ho fitsinjovana ireo mpandraharaha mpamatsy aterineto(Fournisseur d’accès internet) , dia voafetra na ny “zone de couverture” na ny fetran’ny connexion azon’ny olona tsirairay ampiasaina , na ny fotana ampiasana azy izany na ny habetsany/ volume.